Amanqaku kaJeff Kerr Martech Zone |
Amanqaku ngu UJeff Kerr
UJeff uyi-CEO kunye nomseki-kunye ItyalaFleet. I-CaseFleet yisoftware yolawulo lwamatyala exhobisa abagxeki ukuba baphumelele ngaphezulu, ngezixhobo zokwenza amaxesha abekiweyo, ikhalenda yezomthetho, ukuhlawula kunye nokunye.
Ungabagcina njani abaSebenzisi bakho bonwabile xa ukhupha uHlaziyo oluPhambili kwiSicelo sakho
NgoMgqibelo, ngoJuni 10, 2017 UJeff Kerr
Kukho ukungavisisani kwendalo kuphuhliso lwemveliso phakathi kokuphuculwa kunye nozinzo. Kwelinye icala, abasebenzisi balindele amanqaku amatsha, ukusebenza kunye nokubonakala okutsha; kwelinye icala, utshintsho lunokubuyela umva xa ujongano oluqhelekileyo lunyamalala ngesiquphe. Olu xinzelelo lukhulu xa imveliso itshintshwe ngendlela ephawuleka- kangangokuba inokubizwa ngokuba yimveliso entsha. KwiCaseFleet sifunde ezinye zezi zifundo ngendlela enzima, nangona kunjalo